बर्षौं बर्ष देखि आकाशमा जहाज उडाउदै आइरहेकी नेपाली चेली – AB Sansar
December 28, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on बर्षौं बर्ष देखि आकाशमा जहाज उडाउदै आइरहेकी नेपाली चेली
लिएपनि नेपाल फर्केपछि उनी २ वर्ष बेरोजगार भइन्।
दुई बर्षे बेरोजगारीले उनमा पर्याप्त मानसिक आर्थिक तनाब बढायो। सन् २००९ मा नै पाइलटको तालिम सकेर नेपाल फर्केकी थिइन् उनी। तर लाइसेन्स भने सन् २०१२ मा मात्र प्राप्त गरिन्। लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि सेप्टेम्बर २०१२ देखि बुद्ध एयरको विमानको साँचो उनको हातमा पर्यो।२ बर्ष बेरोजगार बनेपछि पाएको विमान उडानको अवसरले जीवनमा सबैभन्दा धेरै खुसी दिएको बताउँछिन् उनी। ‘२ वर्ष जागिर नपाउँदाको पीडा बिर्सने कुरै थिएन,
तर विमान उडान गर्दैगर्दा उदाउँदै गरेको सुर्यको मनमोहक दृश्यले ती पीडा बिर्साइदिन्छन्’ पेमा भन्छिन्, ‘स्व’र्ग कस्तो हुन्छ, थाहा छैन। तर विमान उडान गर्दा देखिने सेताम्मे हिमाल नै स्व’र्ग हो जस्तो लाग्छ।’
विमान उडान गर्दाका यिनै रमाइला अनुभवहरुसँगै उनी आफ्नो पेशाप्रति निकै गर्व गर्न थालेकी छन्। पेमाका भनाईमा, विगतका दिनमा पाईलटले जागीर पाउन कठिन थियो। तर पछिल्लो समय नयाँ एयरलाइन्सहरु खुल्दै गरेको हुँदा पहिलेजस्तो कठिन छैन्। तर, लाखौ खर्चेर पाइलटको तालिम लिएपनि खर्च अनुसारको तलव नभएकोमा चाहिँ उनी स’न्तुष्ट छैनन्। यो समाचार नेपल खाबरमा छ ।
पत्नीले धोका दिएपछि बिरक्तिए दीलिप !
जे माग्यो त्यहि पुरा हुने मन्दिर ! नाग र बाघले गर्छन मन्दिरको रक्षा ! जहा यस्तो रुपमा देखिन्छन भगवान (हेर्नुहोस भिडियो)
आम ह’ड्ताल सफल पार्न उत्रिएका पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झाको टाउकोमा प्रहरीको लाठी